Fifandimbiasana apôstôlika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fifandimbiasana apostolika)
Ny fifandimbiasana apôstôlika dia ny fampitan'ny Apostoly tamin' ny mpandimby azy ireo ny fahefana azony avy tamin' i Jesoa avy any Nazareta. Ireo mpandimby ny Apôstôly ireo ihany no afaka mampianatra sy mitantana ny fiangonany avy. Ny fifandimbiasana apôstôlika dia miampita amin' ny alalan' ny fanamasinana sy fanokanana ataon' ny eveka izay voafaritry ny lalàna (kanôna) sasany ny fananany hery. Izany dia fiheverana manokana misy ao amin' ny kristianisma ka mahatonga ny fiangonana katôlika sy ôrtodoksa tsy hanaiky ny asa na ny fahefan' ireo mpitondra fiangonana amin' ireo fiangonana kristiana hafa (ny fiangonana antekalkedoniana sy ireo nateraky ny refôrmasiôna prôtestanta).
Hevitra ara-tantaran' ny fifandimbiasana apôstôlikaModifier
Ny fifandimbiasana apôstôlika dia mampahatsiahy ny Fiangonana voalohany, naorin' ny mpianatr' i Jesoa, izay nanana rafitra antanantohatra: nisy ny atao hoe episkôpa, presbitra, diakôna (na diakra) izay nialoha lalana ny rafi-pitantanana ny fiangonana episkôpaly ankehitriny. Izany rafitra izany dia fanta-pisiana tamin' ny taonjato voalohany araka ny epistily (taratasy) nosotratan'i Ignatio avy any Antiokia.
Ny mpahay tantara, hatramin' i Afred Loisy ka hatramin' i François Laplanche, dia nihevitra fa izany fandaminana izany dia mampiavaka manokana ny fiangonana tany Egipta izay hany fiangonana nahitana mpikambana maro dia maro izay tsy fahita tany amin' ny toeran-kafa raha tsy tamin' ny taonjato faha-3 taor. J.K. Tsy nisy "Fiangonana" tahaka izany talohan' ny fiafaran' ny taonjato faha-3 sy fanombohan' ny taonjato faha-4, izany hoe tamin' ny fotoana nanenjehana nataon' i Diôkletiano ny Kristiana (taona 306), izany hoe tao amin' ireo faritra nahamaro azy ireo.
Ny rafitra momba ny andrim-pitondrana ny fiangonana dia niorina noho ny fanoherana sady fahita tao Aleksandria izay nialokalofan' i Petera tany an-tany efitra mba handrindra ny fanoherana avy any ivelany fa ny eveka Meletiosy (na Meletio) kosa nandamina ny fanoherana avy ao anatiny izay narahana fiofanana ara-teôlôjia ho an' ny rehetra. Ny Kristiana tao Aleksandria dia nanome ny anaram-bonahitra hoe papa (izany hoe "ray") an' i Petera avy any Aleksandria (evekan' i Aleksandria sady rain' ny fiangonana) sady tamin' izany no fantatra voalohany fa nanomezana io anaram-boninahitra io. Ny fifandraisan' i Petera sy i Meletiosy dia nihasimba dia nihasimba tamin' ny fotoana tsy nampisy intsony ny fanenjehana.
Ny teny grika hoe ἐκκλησία / ekklesia (avy amin' ny matoanteny hoe ἐκκαλέω / ekkaleô, "miantso hivory", "mampivory") dia tsy nanana ny heviny hoe "trano fivavahana" na "andrim-pivavahana" taha tsy tamin'ny taonjato faha-3. Talohan' izany dia fiaraha-mivory mba hanapa-kevitra no nampiharina sahala amin' izay nitranga tao amin' ny Ekklesia (fivoriam-bahoaka), fivoriam-pirenena tao Atenay tamin' ny Andro Taloha.
Izany fomba fijery ny tantaran' ny fiangonana dia tsy azoazon' ny Fiangonana katôlika izay manambara fa, noho ny fanokanan' ny eveka, ny eveka dia miantoka ny fitohizan' ny "fanirahana lehibe" nankinin' i Kristy ny Apôstôly.
Amin' ireo sampana maron' ny prôtestantisma dia tsy niteny afa-tsy tamin' i Petera i Jesoa araka ny Evanjely (Mat. 16.16) sady tsy nieritreritra ny amin'izany fifandimbiasana apôstôlika izany. Ny Fanahy Masina irery ihany no manome ny fahefana, ary ny safidin' ny fivoriana voafidin'ny besinipmaro. Ny litorjian' ny ôrdinasiôna dia tsy mahalala afa-tsy izany fahefana manokana nomen' Andriamanitra izany persôna izany. Tsy misy olona vitsy manana ny fampianarana na ny fahefana marina. Amin' ny litorjian' ny ôrdinasiôna, ny vahoakan' Andriamanitra dia manaiky ny olona voafidy hanatanteraka ireo ministera samihafa, dia ny fanomezam-pahasoavana nomen' ny Fanahy Masina azy ireo.
Loharano sy fanamarihanaModifier
↑ Izao no tenin'i Jesoa Krisy raha naniraka ny Apôstôly: "koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin' ny anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan' ny fahataperan' izao tontolo izao." (Mat 28:19-20)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifandimbiasana_apôstôlika&oldid=1000187"
Dernière modification le 12 Janoary 2021, à 04:05
Voaova farany tamin'ny 12 Janoary 2021 amin'ny 04:05 ity pejy ity.